FIFIDIANANA : “Tsy tokony hafangaro ny lisitry ny Ben’ny tanàna sy ny lisitry ny mpanolotsaina”
Razakandrainy François Xavier Bezoro, iray amin’ireo Ben’ny tanàna nandalo karazana lalam-pifidianana tsy mitovy satria efa lany ho Ben’ny tanàna izy ny taona 1999 sy ny taona 2003 ary farany teo, ny taona 2015. 23 août 2019
Tsy nitovy ny lalam-pifidianana tamin’ireo vanim-potoana ireo satria tany aloha, niavaka mihitsy ny lisitry ny Ben’ny tanàna ary nitokana ihany koa ny lisitry ny mpanolotsaina. Rehefa tsy lany ho Ben’ny tanàna ilay kandida natokana ho amin’izany dia mipetraka amin’izao fotsiny izy. Tamin’ity farany ity kosa, lisitra tokana ny kandidà Ben’ny tanàna sy ny kandidà mpanolotsain’ny tanàna, ka rehefa tsy lany ho Ben’ny tanàna ilay lohalisitra dia mety ho mpanolotsaina arakaraka ny vato azony.
Izay indrindra no nanontaniana ity Ben’ny tanànan’Antehiroka ity satria fombam-pifidianana roa samy hafa no nahalany azy. Ny inona amin’izy roa tonta ireo no ahafahana mampandroso kokoa ? Araka ny nambarany, ity farany ity dia tsy nahafahana nanao zavatra loatra satria saika zary famalifaliana ireo mpanolotsaina fotsiny ny androantokon-draharaha, hoy izy. Ny mahamaika an’ireo koa dia ny tombontsoany mandritra ny androm-pivoriana, hoy hatrany ity Ben’ny tanàna voky traikefa ity.
Ho azy araka izany, mila avahana tsara ny lisitry ny Ben’ny tanàna sy ny lisitry ny mpanolotsaina raha tiana marina ny hisian’ny fampandrosoana fa tsy hifamingana anaty fotsiny eo ireo samy olom-boafidy ireo na koa hifanakon-dravina satria voatery mitady kopaka isasahana na koa marimaritra iraisana fa raha tsy izany, sakanana fotsiny izao ilay tetikasam-pampandrosoana. Tsotra ny antony, ilay mpifaninana politika taminao no lany mpanolotsaina, na mety aza no ataon’ny mpanatanteraka, mitady hirika hitsivalanana izany hatrany ilay mpifanandrina.
Zavatra faharoa nambaran’ity Ben’ny tanànan’Antehiroka ity ihany koa ny momba ny tokony tsy hifandisoan’ny paikady fampandrosoana any an-tampony sy eny ifotony. Tahaka ny bokotra akanjo io, hoy hatrany izy ka na mety aza ny any ambony rehefa mifandiso ny aty ambany, ny haingo iray manontolo no lasa mandringa. Izany hoe, na mametraka izao karazana vina sy velirano ary tetikadim-pampandrosoana samihafa izao aza ny Filoham-pirenena rehefa olona hafa loko politika na hafa foto-kevitra aminy no ho lany Ben’ny tanàna eny ifotony, hifanipaka ihany ny raharaha. Koa aminy, tokony hojeren’ny mpifidy akaiky sy ireo antoko politika izay mba tsy ho lany andro hifanjihitra fotsiny ny Ben’ny tanàna sy ny fitondrana foibe.
Izy manokana, resy lahatra fa mbola ananan’ny mponin’Antehiroka trosa satria nisy ireo vinavinan’asa nokasiany hotanterahina kanefa noho ilay rafitry ny fomba fifidianana teo, zary sakana ny filankevitry ny tanàna satria izay nety tamin’izy ireny notanterahina. Misy ny vita na izany na tsy izany ary ankasitrahany ireo tsara sitrapo nanampy azy tamin’ny fanatanterahana izany kanefa mbola misy koa ny tiany hovitaina. Iray amin’ireny ny famitana ny Lycée satria Antehiroka irery ihany eny amin’ireo kaomina mpifanolobodirindrina no tsy manana an’io ka voatery mankany Ambohimanarina na Talatamaty na Ambohidratrimo na koa Ivato no miezaka ireo mpianatra.
Izy moa dia nanohana ny Filoham-pirenena am-perin’asa na tamin’ny fihodinana voalohany na tamin’ny fihodinana faharoa, izany indrindra no mahatonga azy miteny hoe aleo ny mitovy loko no mitondra ny fampandrosoana fa raha tsy izany ho lany andro hifamingana fotsiny eo.